နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှ မိန့်ခွန်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှ မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံမှ မိန့်ခွန်း
Posted by lynn lynn on Sep 28, 2012 in Copy/Paste |9comments
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ( ၆၇) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်မှ ( ၆၇) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေ ညီလာခံတွင် ပြောကြားသည့်မိန့်ခွန်း
နိုင်ငံတော်သမ္မရုံး website မှ ကူးယူပါသည်။
( နယူးယောက်မြို့၊ ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်) (23:44)
အလားတူပဲ (၆၆) ကြိမ်မြောက် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံကြီးရဲ့ သဘာပတိ အဖြစ် အဆွေတော်ရဲ့ရှေ့က ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ မစ္စတာနာဇီး အယ်လ်နာဆာကိုလည်း ပြောင်မြောက်စွာ ခေါင်းဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် တန်ဖိုးထား ကျေးဇူးတင် ရှိပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါတယ်။
About lynn lynn
lynn lynn has written 12 post in this Website..
View all posts by lynn lynn →
Bravo ! Mr. President ! if you do your best with genuine conscience, we believed that you can bring the hope of all of our country man and woman in near future !
သမ္မတကြီးကို ပိုပြီးလေးစားယုံကြည်မိပါတယ်….ပြည်သူတရပ်လုံးအားထားတဲ့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို
နိုင်ငံတကာ ရှေ့မှောက်မှာ အလေးထားပြီး ဂုဏ်ယူစွာထုတ်ဖေါ်ပြောကြားတဲ့ အတွက် အံ့သြ၀မ်းမြောက်
ဒါကတော့ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး…က ညွှန်မှူးရဲ့ ဖေ့ဘွက်မှာ မန့်ထားတာတွေကိုရေးထားတာပါ့။
ရင်ကို လာမှန်သော မှတ်ချက်များ
ယမန်နေ့က နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ UN Speech ကို ကြည့်ပြီး ကျွန်တော့် ဝေါလ်တွင် ပေးထားသော မှတ်ချက်များမှ အချို့ကို ထုတ်နှုတ် တင်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
Tin Minhtwe ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျန်တာတွေမပြောနိုင်တော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော်ရိုးသားစွာပြောတာပါကျွန်တော်အပါဝင်ကျွန်တော်မိသားစုတစ်စုလုံးအမည်မဖေါ်နိုင်တဲ့စိတ်ခံစားမူ့ကြောင့်မျက်ရည်ကျရပါတယ်၊ကျွန်တော်ဘကြီးအသက်၆၇ဆိုရင်မျက်ရည်ကျပြီးလက်ခုက်တီးနေ
Thit Thit Myint Saing သမ္မတကြီး .. မိန့်ခွန်း .. ကြောင့် ..
ခံစားချက်တွေများစွာ နဲ့ .. ကျမ ..
TV ကနေ လွှင့်လိုက်တဲ့ သီချင်းကြောင့်
ကျမ မျက်ရည် ကျ ရပါတယ် ..
အဆိုတော်တွေ ပေါင်းစုပြီး ဆိုထားတဲ့
copy သီချင်းတပုဒ် ပါ ..
အဲဒီ မှာ ..
” မြန်မာပြည်ဟာ တနေ့မှာ ကမ္ဘာအလည်မှာ ဝင့်ဝါ ဂုဏ်အရှိန်အဝါ တင့်မယ်လေ ” တဲ့ ..
အဲဒီသီချင်း ကို ကြားပြီးတဲ့ သကာလ ..
ကျမ ကြည်နူးမှု နဲ့မျက်ရည်ကျရပါတယ် ..
ကျမ တို့ ရဲ့ .. အနာဂတ် မဝေးတော့ဘူးထင်ပါရဲ့ ..
Lu Mhar သမ္မတကြီးရဲ.မိန်.ခွန်းမှာ ဒီမိုကရေစီရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အားဆုချီးမြှင့်ခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ.ဂုဏ်ယူမိပါကြောင်းလည်းပြောလိုက်ရော ကြက်သီးမွေးညှင်းထပြီး မျက်ရည်တောင်လည်မိပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူပြည်သားများကလည်း မြန်မာသမ္မတ တဦးက UN မှာ အခုလိုပြောဆိုခွင့်ရနေတာကို ၀မ်းသာဂုဏ်ယူမိကြောင်းပါခင်ဗျာ။
Soe Min Lu Mhar ပြောတာနဲ့ ကျနော်ပြောချင်တာ အတူတူပဲ။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ခံစားရပါတယ်။ ကျနော့်အမေနဲ့ ဇနီးလဲ ဒီလိုပဲ ခံစားရပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Tk Tuang ကမ္ဘာမှာ မြန်မာဆိုတာ ဂုဏ်မငယ်တော့ပါဘူး ဒီနေ့အနောက် နိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး ရဲ့ ခေတ်သစ်ဖခင်ကြီး နှင့် မိခင်ကြီးရဲ့ ခြေလှမ်းတွေက်ိုကြည့်ပြီး ကြည်နူးရင်း သူတို့နှစ်ဦးပြန်လာချိန်ကို မျှော်လျက်မောလှပါပြီ
Ko Hein အဖေရော အမေ ရော ကျန်းမာပါစေဗျာ……….ဒို့တိုင်းပြည်က မိစုံဖစုံရှိတယ်ကွ……တက်ညီလက်ညီနဲ့ တက်လှမ်းလိုက်လို့က တော့ တွေးရင်းကြက်သီးတောင်ထတယ်…..အောင်မြင်ပါစေ မြန်မာပြည်………
အပေါ်က ကလိလိုက်တာ လက်လွန်သွားတယ်။ဆော်တီး
ကြိုဆိုပါကြောင်း နှင့် ဒီထက်ပို၍ကြိုးစားဖို့လိုကြောင်း
“ကုလသမဂ္ဂရဲ့ တတိယမြောက် အတွင်းရေးမှူးချုပ်အဖြစ် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့ သားကောင်း ဦးသန့် အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်အနေနဲ့ အဲဒီတုန်းကပဲ “တစ်ခုတည်းသော ကမ္ဘာ” (One World) ဟူသောအမြင် ကြိုတင်ရှိထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးသန့်အနေနဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးကို ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ပြီး မတူကွဲပြား ခြားနားမှုများ ရှိနေသော်လည်း လုံခြုံ ဘေးကင်းတဲ့ ကမ္ဘာကြီးအဖြစ် မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ ပြည်သူအားလုံးဟာ ကိုယ်ချင်းစာ တရား၊ နားလည်မှု၊ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု၊ သည်းခံခွင့်လွှတ်မှု တို့ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်ကြမယ်လို့လည်း ဦးတည် မျှော်မှန်းထားပါတယ်။ အမြော်အမြင်အရ လိုက်နာ ကျင့်သုံး နိုင်မယ်ဆိုရင် ပိုမိုငြိမ်းချမ်းပြီး သာယာဝပြောတဲ့ ကမ္ဘာကြီး အဖြစ်သို့ ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်။
ကျွန်တော့ အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူများ အနေနဲ့ ဦးသန့်ရဲ့ ဆောင်ရွက်ချက်တွေနဲ့ အောင်မြင်မှုတွေကို ဘယ်တော့မှ မေ့ပျောက်သွားမှာ မဟုတ်ဘဲ၊ အစဉ်ထာဝရ ချီးကျူး ဂုဏ်ယူနေမည် ဖြစ်ပါကြောင်း”
သခင်နုလက်ထက်ကစပြီး၊ ဗိုလ်နေ၀င်း၊ ဗိုလ်သန်းရွှေ တို့လက်ထက်အထိ ဦးသန့် လို့ဆိုလိုက်ရင် တီကိုဆားတို့လိုက်သလို မနာလိုဝန်တိုစကားနဲ့သမိုင်းတွင်ကြသူတွေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ အမှောင်ခေတ်ကနေ ဒီလိုအမှန်ကိုပြောရဲ သမိုင်းကိုသင်ပုန်းချေရဲသူ ပုဂ္ဂိုလ်ထူးတယောက်ပေါ်ပေါက်လာလို့…။ ခေတ်ပြောင်းပြီဟေ့လို့..လက်ခမောင်းခတ်ရင်းမျက်ရေများလည်မိ ၀မ်းသားအားရဖြစ်မိရပါတယ်။
သမဒဂျီး၏ဘောကြီးအားမ လိုသည်မှာ ရွှေထုပ်သည်မြပုဝါနှယ် တုနှိုင်းလိုပါသည်ဟု ဂေဇက်ရွာသဂျီး မစ္စတာဘိုလမ်းနီးကိုယ်စား ဂုံယူဝံ့ကြွားစွာ လက်ခမောင်းခတ်ပြောကြားပါသည်။ :bar:
ကျုပ်တို့ သဂျီးက ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ဘိုလမ်းနီး ဖြစ်သွားရသနည်း